နေးဒါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ / IBC တင်ခဲ့သော & ဘဏ်လုပ်ငန်း
နေးဒါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ / IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း / ဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးကဂရိနေဒါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် '' ဆန္ဒပေါ် မူတည်. တစ်ဦး IBC ကုမ္ပဏီ, ကော်ပိုရေးရှင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလက်တွဲနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ IBC အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအဖြစ်ကောင်းစွာကော်ပိုရေးရှင်း၏နာမကိုအပေါ်နေးဒါဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။
2002 ၏နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေတစ်ရပ် IBC ၏ဖန်ဆင်းခြင်း, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဖျက်သိမ်းအုပ်ချုပ်။
ပြင်သစ်မူလကဗြိတိသျှမှပေးအပ်လိုက်ရသည်အခါ 1650 သည်အထိ 1763 အတွက်ကျွန်းများကိုလိုနီ။ ဒါဟာ 1974 အတွက်ခွင့်ပြုလွတ်လပ်ရေးသည်အထိဗြိတိသျှနယ်မြေတွေကိုနျြရစျ။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကယင်း၏ဧကရာဇ်အဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်နှင့်အတူဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အောက်မှာနေတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။ ဒါဟာကိုယ်စားလှယ်များရာအိမ်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦးအထက်လွှတ်တော်ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ပါလီမန်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဂရိနေဒါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိသွား:
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: တစ်ဦး IBC အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
• လုံးဝကင်းလွတ်အခွန်: နေသမျှကာလပတ်လုံးအဘယ်သူမျှမဝင်ငွေနေးဒါအတွင်းမှရရှိခဲ့ပါသည်အတိုင်း, တစ်ဦး IBC အားဖြင့်ဝင်ငွေအားလုံးအားလုံးအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်အခြားသူများကိုသူတို့၏အခွန်အရာရှိများအားလုံးကိုဝင်ငွေအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များ '' တာဝန်ယူမှုကိုသူတို့ရဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်သည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။
• တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဟာ IBC မှစုစုပေါင်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ယင်း၏သာညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးဝေမျှမယ်မြို့တော်: နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်: အစိုးရအစာရင်းစစ်အကောင့်အသစ်များ၏ FILE မလိုအပ်ပါဘူး။
• အဘယ်သူမျှမအစည်းအဝေးများ: နှစ်စဉ်ယေဘုယျရှယ်ယာရှင်များ '' အစည်းအဝေးများသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာများ '' အစည်းအဝေးများအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များ '' အမည်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ် မဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ။
• အင်္ဂလိပ်: ဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ်, နေးဒါရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
နေးဒါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) အမည်
တစ်ဦး IBC ကိုလည်းကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကတည်းက၎င်း၏ကုမ္ပဏီအမည်စကားလုံးများကို "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရား" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "LLC" နဲ့အဆုံးသတ်သင့်ပါတယ်။ သို့သော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပဒေရေးရာ entity အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏, IBC ရဲ့အစ "ကော်ပိုရေးရှင်း" သို့မဟုတ် "ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း" နဲ့အမည်များနောက်ဆုံးတွင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်; သို့မဟုတ်မိမိတို့၏အတိုကောက် "ကော်ပိုရေးရှင်း" သို့မဟုတ် "Inc ကို" ။
ကုမ္ပဏီအမည်များကိုလိုင်စင်မရှိဘဲလူ့အဖွဲ့အစည်း, အာမခံ, ဒါမှမဟုတ်ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုတည်ဆောက်ခြင်း, သာထိုကဲ့သို့သောဘဏ်အဖြစ်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများအတွက်အဓိပ်ပာအသုံးအနှုန်းများကိုသုံးပါဘယ်တော့မှရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လက်မှတ်ထုတ်ဝေသည့်အခါတစ်ဦး IBC ထည့်သွင်း။
အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများအတွက်ဒါရိုက်တာများ, အရာရှိများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် (သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များ) ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဖော်ပြရန်။ ဘယ်လိုကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်လည်းပါဝင်သည်။
IBC ရှယ်ယာရှင်များ '' တာဝန်ယူမှုကိုရှယ်ယာမြို့တော်မှ၎င်းတို့၏အလှူငွေဖို့ကန့်သတ်သည်။
အဆိုပါဒါရိုက်တာများ (တစ်ဦးထက်ပိုလျှင်) မကြာခဏဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်လည်စည်းမဲကိုရှောင်ကြဉ်ရန်မညီမညာဖြစ်နေသောအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်အတူဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဖန်တီးပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်စေမယ့်တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ရှယ်ယာရှင်များ
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များမဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားနေထိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်ရဲ့အမည်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်နေစဉ်, သူတို့ကအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်မမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အတူတင်သွင်း။
ရှယ်ယာတန်းတူတန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်လုံးဝမတန်းတူတန်ဖိုးကိုတဦးရှယ်ယာများတွင်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှေးနု, preference ကိုအစုရှယ်ယာအဖြစ်ထုတ်ပေး, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘဲမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာခွင့်ပြုမထားပေ။
ပုံမှန်ခွင့်ရှယ်ယာမြို့တော် $ 50,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ရှယ်ယာမြို့တော်ခွင့်အာဏာမျှလိုအပ်တဲ့နိမ့်ဆုံးလည်းမရှိ။
မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်, Office နဲ့အရာရှိချုပ်
တိုင်း IBC အဆိုပါမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ IBC ထည့်သွင်းသူတစ်ဦးလိုင်စင်ရဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျရမယျ။ ထို့အပြင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဆွဲသွင်းပါဝင်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရှယ်ယာများအတွက်စာရင်းပေးသွင်းထားသူအဖြစ်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်တွေနဲ့အပြုအမူထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
IBC ရဲ့မဖြစ်မနေကိုလည်းဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးရှိသည်နှင့်အတွင်းရေးမှူးခန့်အပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်စေသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီရှိနိုင်ပါသည်။
IBC ရဲ့၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ, ရှယ်ယာရှင်များ, ဒါမှမဟုတ်ဒါရိုက်တာများအဘို့နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်မလိုအပ်ပါ။ သူတို့အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်ပြုလျှင်, သူတို့ကအခြားနိုင်ငံများတွင်ရာအရပျယူနိုငျသညျ။ ထို့အပြင်အစည်းအဝေးများ၌ရှိသကဲ့သို့ရှည်လျားအားလုံးအရည်အချင်းပြည့်သင်တန်းသားများကိုအစညျးအဝေးနေ့နှင့်အချိန်ကြိုတင်အသိပေးခံယူအဖြစ်အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းများအားဖြင့်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
IBC ရဲ့နှစ်ပတ်လည်မှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file မှမလိုအပ်ပါ။ စာရင်းစစ်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်သူတို့ကဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။
နေးဒါပြင်ပကနေတစ်ခု IBC ထုတ်လုပ်စုစုပေါင်းဝင်ငွေနဲ့တူ non-နေထိုင်သူကုမ္ပဏီများသည်အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများကြွေး။ ကော်ပိုရိတ်အခွန်ဝင်ငွေအခွန်, အခွန်ကိုသိုထားသော, ခွဲဝေအခွန်အတိုးအခှနျ, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်, လွှဲပြောင်းအခွန်, ဆုကြေးဇူးကိုအခှနျ, အမွေအခွန်နှင့်အိမ်ခြံမြေအခွန်: အ IBC နှင့်ရှယ်ယာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်အားလုံးအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ နေးဒါထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့် နေ့မှစ. မှာအနည်းဆုံး 20 နှစ်ပေါင်း IBC ရဲ့ဒီအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအာမခံ။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအားလုံး FILE အများပြည်သူတို့ကဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်စဉ်အခါ, ရှယ်ယာရှင်များ '' အမည်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကဂရိနေဒါနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ (IBC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိသွား: စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအခွန်, ရှယ်ယာရှင်များရဲ့ privacy, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးမျှနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်မျှလိုအပ်တဲ့စာရင်းစစ်မျှလိုအပ်တဲ့အစည်းအဝေးများနှင့်အင်္ဂလိပ်ဤ ယခင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီရဲ့ရုံးသုံးဘာသာစကား။